Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Jurgen Klopp Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Ihe Nkịtị. Anyị Jurgen Klopp Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Obi abụọ adịghị ya, Jurgen Klopp mara maka ịdị mma ya na ogo kpakpando. Mgbe ọ banyere n’ime ụlọ, ndị mmadụ na-achọpụta. N’agbanyeghi na onwere obere ara banyere ya, onye obula huru uzo ndu ya n’anya.
Akụkọ Jurgen Klopp nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Jurgen Norbert Klopp na Stuttgart Germany na January 26th, 1963 ka nna papa ya bụ Norbert Klopp, onye bụ ezigbo onye na-agba ọsọ amateur na nne Elisabeth Klopp, bụ onye ahịa.
Klopp jiri oge niile ọ bụ nwata nọrọ na German Black Forest n'obodo Glatten ebe ya na ụmụnne ya ndị nwanyị abụọ tọrọ (Isolde Reich na Stefanie Klopp) ndị mụrụ ya zụlitere ya.
Klopp nwere mmekọrịta ya na onye ọ bụla dị ka nwata. Oge ndụ nwata ya dabere na otu okwu 'Iguzosi ike n'ihe'. Ọ hụghị nrọ n'anya. Ọ na-edozi obere oge dị ka nwata. Nke ahụ bụ n'ezie ike ya. Nkwado na ịchụ onwe onye n’àjà nye mba ya.
Jurgen Klopp Growbọchị Na-eto Eto:
Mgbe Klopp dị ka nwatakịrị, ọ na-ekwu ihe ọ pụtara, ma na-ekwu ihe ọ na-ekwu. Ọchịchọ nwata ya bụ ịghọ ndị na-agba ụkwụ na onye na-elekọta ndị football.
Ọ malitere ịlụ nrọ mgbe ọ sonyeere otu ìgwè ndị Germany nọ na mpaghara Ergenzingen mgbe ọ dị afọ 16. Ọ na-eguzosi ike n'ihe nye egwuregwu ahụ site na mmalite. Iguzosi ike n'ihe nye ya pụtara imezu nnukwu nrọ a na mba ya ọ hụrụ n'anya, Germany.
Jurgen Klopp mgbe ọ dị obere na-amụta na ọ gaghị ewere onwe ya dị oke mkpa ma nwee obi ụtọ ịbụ isi nke egwuregwu onye ọ bụla. O kwenyere na ihe enweghị ike ịga mgbe ọ bụla, mana ọ na-ebuli onwe ya elu ma nwaa ọzọ.
O nwere ahụ iru ala mgbe ọ tụbara ya na mpaghara ọ bụla. Dị ka ezigbo mmadụ, ọ na-edebe ụlọ ya mgbe niile n'ubu ya. Ọ na-eche echiche tupu ya emee ihe, ma ghara ikwe ka mmetụta uche ya kachasị ya mma.
Nzube nwata nwoke Jurgen Klopp mechara mezuo dị ka a hụrụ na ike ya ịghọ ụmụ amaala na onye njikwa egwuregwu bọọlụ na Germany.
Jurgen Klopp Ọrụ Nlekọ Oge.
Klopp nọrọ ihe ka ukwuu n'ime afọ 15 ya na-egwu egwu na Mainz 05. Ọ malitere onye na-eti ihe maka klọb ahụ tupu ọ gbanwee gaa na onye na-agbachitere aka nri na 1995. O meriri ngụkọta nke ihe mgbaru ọsọ 52 maka Mainz.
Mgbe ezumike nká ya na-egwu Mee 05 Mainz, A họpụtara Klopp ka ọ bụrụ onye njikwa ụlọ ọrụ na 27 February 2001 na-eso nchụpụ Eckhard Krautzun. Ọ nọgidere dị ka njikwa ruo afọ asaa, n'oge nke ọ duru otu ahụ gaa na nke mbụ ya na Bundesliga, na iru eru maka 2005-06 UEFA Cup.
Mats Hummels Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Na 2008, Klopp sonyere Borussia Dortmund, na-eduga ha na Bundesliga azụ na-enweta mmeri 2011 na 2012, Nakwa dị ka DFB-Pokal in 2012, na DFL-Ngwunye in 2013 na 2014, na ọdịdị nke abụọ ha na UEFA agbachitere Njikọ ikpeazụ na 2013.
Klopp meriri Onye Gọọmenti Na-ahụ Maka Gọọmentị nke German n'afọ in 2011 na 2012, tupu ịhapụ Dortmund na 2015 ebe ha ghọkwara onye nchịkwa kachasị ogologo oge ha.
Ọ ghọrọ onye njikwa nke Liverpool na October 2015. Ọ bụ naanị German nke abụọ na-achịkwa na Premier League. Nke mbụ bụ Felix Magath onye na-elekọta Fulham na 2014.
Ndị nne na nna Jurgen Klopp:
Mama Elisabeth Klopp nke Jurgen Klopp kwuru otu oge, sị: “Nwa m nwoke na mmadụ niile na-adị ná mma. Ọ na-egwu bọl n'ubi n'èzí n'oge ọkọchị na n'oge oyi, ọ setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ na ime ụlọ. ".
Jurgen Klopp na mama m, Elisabeth Klop.
Nke a bụ otú o si akọwa ọganiihu nwa ya nwoke niile. Klopp na mama ya nwere mmasị na ibe ha.
Dị ka Klopp si kwuo, ”Ma ndị mụrụ m ma mbara ụwa abụọ. Mama na-aghọta ihe niile, nna ọ bụghị nke ukwuu. Mana n'ezie, ọ gbalịrị inye ndụmọdụ ma ọ gbalịrị ịwụnye ọkụ n'ime m ka ọ ka mma ma ghara inwe afọ ojuju n'oge na ihe ndị dị otú a ".
N'ikwu okwu banyere onye ọ bụla na-egwu egwuregwu na papa ya, onye kụzikwaara ya ka ọ gbaa ski ma kpọọ tennis, Klopp kwuru, sị: "Ọ na-atọ m ụtọ na m na-achọkarị ihe ọ chọrọ." Echetara m na ọ na-agwa m mgbe niile, "Ígwè na-eme ka ígwè dị nkọ dị ka mmadụ na-amụ mmadụ."
Obi gbawara Klopp mgbe Norbert nwụrụ na 2000, bụ agadi 68, na-agbaso afọ abụọ na ọrịa cancer, karịsịa n'ihi na papa ya ahụghị ya ka ọ bụrụ onyeisi nchịkwa na Dortmund na 2008.
Nna Jurgen Klopp, Norbert Klopp.
Mgbe ọ nwụsịrị, Klopp ji mmiri na-agbanye 20,000 Frog na-agbanye ihu ya wee sị: “Ihe niile m bụ, ihe niile m nwere ike ịbụ, hapụ m, papa. M ka na-eche na ị na-ele m anya site n'elu. ”
Banyere Sabine Klopp - Nwunye nwunye Jurgen Klopp:
Klopp bụ onye gbara alụkwaghịm. Ọ lụrụ Sabine Klopp onye ya na nwa nwoke nwoke bụ Marc, onye na-egwuri egwu na Dortmund mana nnukwu mmerụ ahụ mere ka ọ kwụsị egwuregwu ahụ. Klopp na nwunye ya mbụ kpebiri ka ha kewaa na mbido 2001.
Jurgen Klopp na nwunye nwunye; Sabine Klopp.
Ha nwere nwa nwoke Marc, 26, bụ onye lara ezumike nká n'oge na-adịghị anya n'ihi mmerụ ahụ. Di na nwunye ahụ kewara ekebịghike ke Klopp ama ọtọn̄ọ ndibuana ke eto 2001.
O zutere Ulla dị mma mgbe ọ na-elekọta na Mainz 05 ma ọ bụ nwanyị na-akwa nwanyị na mpaghara mmanya.
Klopp kwuru na ọ na-amasị eziokwu ahụ bụ na onye nkụzi a zụrụ azụ, onye nwere nwa Dennis, 27, site na alụmdi na nwunye mbụ ya, "abụghị onye na-agba bọl na amaghị m. Achọpụtara m na ịma mma ".
Di na nwunye lụrụ na 2005 ma na-ebi na Herdecke, obodo dị jụụ nke dịpụrụ adịpụ nke Dortmund.
Jurgen Klopp na nwunye, Ulla.
Mana ha hụrụ ndụ showbiz n'anya ma na-achọ maka magazin n'ụlọ ezumike ezumike ha na agwaetiti North Sea nke Sylt. Jurgen na Ulla zutere na mmanya na Mainz ebe Bundesliga n'akụkụ Mainz 05, onye Klopp bụ onye njikwa, na-eme ememe mgbe niile.
Ulla bụ onye na-azụ nwanyị ma ọ nweghị mmasị na bọl ma ọ bụ mara onye Klopp bụ, mana o chere na ọ mara mma. Di na nwunye lụrụ na Disemba 2005.
Ma Ulla na Jurgen lụrụ di na nwunye, nke ọ bụla na-ewetakwa nwa nwoke na mmekọrịta ahụ. Nwa Jurgen, Marc, na-egwuri egwu maka Borussia Dortmund ruo mgbe ọ lara ezumike nká na 2012 mgbe ọ dị nanị 23
Okpukpe Jurgen Klopp:
Onye njikwa akụkọ ama ama bụ Onye Kraịst. Echiche okpukpe ya na-egosi na anyị nwere naanị otu ndụ a na anyị kwesịrị ịnwa iji nke kachasị mma ya n'ụzọ Ndị Kraịst.
Dị ka Klopp si kwuo, 'Nke ahụ bụ ihe m na-agbalị ime. Ana m eme ike m niile site na ịnụ ụtọ ụbọchị ọ bụla dịka ọ bụ nke ikpeazụ. Ọ na-atọ m ụtọ ịme mmemme, ị drinkingụ mmanya maọbụ ihe ọ bụla n'ihi na echi nwere ike ịbụ njedebe.
Ndụ Jurgen Klopp:
Kama ịzụta ụgbọala ndị dara oké ọnụ, Jungen Klopp nwere obi ụtọ ịnya ụgbọ oloko n'ụlọ ya mgbe egwuregwu bọọlụ ya gasịrị. Mgbe Klopp kwụsịrị ụgbọ okporo ígwè, ọ hụrụ n'anya na ọ ga-agagharị n'ụlọ.
O kwenyela na ọ na-agagharị n'ụlọ mgbe ọ bụla egwuregwu iji chee echiche banyere ihe ọ gaara eme.
Ihe mere Jurgen Klopp ji amasị ịnya ụgbọ oloko.
N'oge ọ na-egwu egwu, Klopp nwetara diplọma na sayensị egwuregwu na Mahadum Goethe na Frankfurt. N'ụzọ dị ịtụnanya, ihe odide ya na-elekwasị anya n'ọsọ ije, kama ịgba ọsọ.
Klopp nwere ntutu isi, dịka Wayne Rooney, na 2012 ma dị oke nganga maka otú o si gbanwee.
Jurgen Klopp Beard Akụkọ.
N'ịgwa ndị nta akụkọ okwu n'ajụjụ ọnụ oge ahụ ọ sịrị: “Ee, ọ bụ eziokwu. Emere m ntutu m. Echere m na nsonaazụ ya dị mma n'ezie, ọ bụghị gị? ”
A maara nwoke 6 ụkwụ 4 ka ọ nwee nnukwu mmemme.
Urdị ememe Jurgen Klopp.
Ma ọ na-eme egwu na-atọ ọchị, na-agafe ahịhịa na ikpere ya ma ọ bụ na-esutu ndị egwu ya egwuregwu Liverpool fans nwere ike inwe ọ muchụ dị egwu na-ekiri dugout dị ka egwuregwu. Klopp ọbụna dọwara ahụ ike otu ugboro n'oge ememe a ma ama.
Jurgen Klopp Biography Eziokwu - Na-enwe mmasị ime ihe dị iche:
Mgbe Borussia Dortmund na-akwado maka asọmpi asọmpi Champions League ha na Arsenal na 2014, Klopp tụgharịrị ohere ịzụ na ama egwuregwu Emirates wee kpọrọ ndị otu ya gaa ogige London Regent kama.
Urdị Ọzụzụ Jurgen Klopp.